Soo dejisan RoboForm 7.9.22.2 – Vessoft
Soo dejisan RoboForm
RoboForm – software ah si ay u maareeyaan sirta ah iyo foomamka web. software waa kara inuu wax badbaadiyo macluumaadka gaarka ah ee user iyo inay soo galaan mid ka mid keystroke magaca iyo password ee koontada website-ka. RoboForm kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan ugu habyaalada foomamka web ee kaararka deynta, xisaab, mail iyo macluumaad kale oo shakhsi ah in u saamaxaaya in ay garab-socodka dheer ee buuxinaya foomamka diiwaangelinta. software waa ay awoodaan in ay sir xogta iyo badbaadin in lagu kaydiyo daruurtii. RoboForm macaamila daalacashada caanka ah, Qalabka telefoonada gacanta iyo sidayaal xogta.
aqbasho Automatic ah oo magac iyo password
buuxintii Instant foomka diiwaangelinta
Sirta macluumaadka shakhsiga ah
Qarni password Random
RoboForm Software la xiriira:
English, Français, Español, Deutsch... BitComet 1.43